बाको उम्मेदवारी निश्चित भैसकेपछि, मैले केही वर्षपहिलेदेखि चिनेको एकजना भाई मसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए । “बुढाको सादागीपन देखेर जनताहुरले (जनताहरुले) भोट दिन्छन् दाई । तपाइँ ढुक्क हुनुस्, बुढाले जित्छन् ।” प्रत्येक पटक गफगाफ गर्दा उनले यो वाक्य तारन्तार दोहोर्याइ रहन्थे ।
चुनाव सम्पन्न भैसकेपछि छलफलको एक तस्बीर, तस्वीरः दिपेन्द्र श्रेष्ठ
जुझारु स्वभावका उनी बा संलग्न दलमा थिएनन । अहिले पनि मलाई अचम्म लाग्दछ कि मैले कहिल्यै पनि कुराकानीको आरम्भ नगरेता पनि फेसबुकमा मेरो उपस्थिती हुँदा साथ उनले संवादको थालनी गरिहाल्थे, “दाई, नमस्कार । सन्चै हुनुुहुन्छ ?”
यो सामान्य औपचारिकता पूरा गरेपछि उनले एक संशयका साथ संवादलाई अगाडि बढाउथे, “हैन तपाइँ नआउने हो र? ढिला भैसकेन र ?”
मेरो उही जवाफ हुन्थ्यो, “म मिलाउँदैछु ।” अनि मात्र उनी मसँग कुराकानीलाई लगभग बिट मार्न खोज्थे, “ढुक्क हुनुस् दाई, बुढाले जित्छन! तर अलि मेहनत चाँहि गर्न पर्छ हैं ।”
चारपाँच महिना पहिले उनी जस्तै विभिन्न वर्ग, उमेर, लिङ्गका अनेक थरी ब्यक्तिहरुसँगको कुराकानीमा धेरै पटक दोहोरिने शब्दहरु मध्य एक थियो— मेहनत ! अर्काे शब्द हुन्थ्यो, युवा परिचालन ! झट्ट सुन्दा सामान्य जस्तै लाग्ने यो शब्द, चुनावी माहोल तात्तिदै जान थालेपछि ज्यादातार प्रयोग हुने शब्द रहिछ, खैर यसका बारे विस्तृतमा पछि सबिस्तार बताउने नै छु । अहिले मलाई उनै भाईले प्रयोग गर्ने “अलि अलि मेहनत”का बारे केही बताउने अनुमति दिनुस । त्योभन्दा पहिले उनै भाईसँगको कुराकानीमा मैले प्रयोग गर्ने वाक्यांश “म मिलाउँदैछु ।” बारे थोरै प्रष्ट पार्न चाहेँ ।
बाको टिकट निश्चित भैसकेर पनि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भैसकेको थियो । अझ मनोनयन दर्ता गरीवरी बासँगै एउटा सानो टोली प्रारम्भिक चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिसकेको थियो । म यतै थिएँ । अनि बारम्बार तीनै जुझारु युवा भाई जस्तै थुप्रै अरुहरुसँगको मेरो अनलाइन गफगाफमा उक्त वाक्यांश अधिकतम प्रयोग भै रहेथ्यो । उता चुनावमा खटिएका, नखटिएका, मलाई चिन्ने या नचिन्ने तर सांसदमा उठेको उम्मेदवारको जेठो छोरो बाहिरै छ रे भन्ने थाहा पाएकाहरु मध्य धेरैको प्रश्न, “हैन बाबु नआउने भए र ?” हुने रहेछ । प्रचारको क्रममा बासँग प्रत्येक साँझ फोनमा कुराकानी भैरहन्थ्यो । यस्तैमा कुनै कुनै साँझ बाले आफूलाई गरिएको यो प्रश्नको जवाफ मबाट खोज्नुहुन्थ्यो । मेरो जवाफ उही हुन्थ्यो, जस्तो मैले त्यो भाईलाई बताउँदा बताउँदै हैरान भैरहेथे ।
एकदिन त आफ्नै भाइँसँग झोक्किनु पर्ने अवस्था आइलाग्यो, उसले पछि बताउँदै थियो, मोबाइल झण्डै भुँइमा बजारिएन दाई । मैले कसोकसो समातिहाले । प्रश्न सामान्य नै थियो, “हैन दाई कहिले हो र आउने ? प्रचार शुरु भैसक्यो ।” तर मेरो जवाफका प्रत्येक पछिल्ला वाक्यहरु कर्कश लाग्दा सुनिएछन् । जस्तो, ६० सालमा बिद्रोहीहरुले बेनी आक्रमण गर्दा फायर खोलेपछि प्रत्येक पछिल्ला फायरका आवाजहरु थिए ।
“मिलाउँदैछु यार, कति झ्याउ लाग्ने हो, जहिल्यै कहिले आउने हो ? म नआए के हुन्छ ? किन आउनपर्छ ? तँ त्यहि छस त ।”
आखिरमा मैले सबै मिलाएर नेपालबाट फर्केको तीन हप्ता पनि नपुग्दै स्वदेश यात्रा शुरु गर्नु नै पर्ने भो । मिलाउने भन्दा साथ, पहिलो मिलाउनु पर्ने काम, आफूले गर्ने कामको नै थियो । आफूले चाहेको दिनको छुट्टी मिलाएर नेपाल गएर आएको एक हप्ता नहुँदै फेरि “नेपाल जानुपर्ने भो छुट्टी चाहिने भो” भन्नु निकै धक लागिरहेथ्यो । तर मलाई मिलाउनै पर्ने बाध्यता थियो । मेरो आग्रह बोसले सुनेन, काम छाड्नुपर्ने भो । फेरि आज काम छाडेर भोलीबाट काममा नजान पाइने होइन । कम्तिमा एक हप्ता त गर्नै पर्ने । यसरी काम छाडेर एक हप्ता अनिवार्य काम गर्न पर्ने विवशतामा परिरहेको मलाई, जसले पनि हैन कहिले हो र आउने ? कि नआउने हो र ? भन्दा कस्तो महशुस हुन्थ्यो होला, यदि तपाइँ आफूलाई बुझ्ने मान्छे ठान्नुहुन्छ भने महशुस गर्न सक्नुहुन्छ । खैर अर्को महत्वपूर्ण मिलाउनु पर्ने पक्ष अर्थव्यवस्था थियो ।
चुनावमा चाहेर या नचाहेर पनि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने बारे विभिन्न विश्वसनीय माध्यम, ब्यक्तिहरुबाट सुनिरहेको भएपनि म उति आश्वस्त भैरहेको थिइँन । अतः मेरै मर्जीले मैले यति रकम जोहो गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । जुन रकमको मैले जोहोे गरिसकेको थियो ।
तर, महत्वपूर्ण मिलाउने पक्ष चाँहि पढाई थियो । डिसेम्बरसम्म सक्काउने लक्ष्य लिएर पढाईमा जोडबल गरिहेको म, पहिला छुटेको एउटा परीक्षाको तयारीमा पनि थिएँ तर त्यो परीक्षा उता चुनाव तोकिएको दिनको ३ दिन अगाडिको मितिमा थियो । जुन मैले मिलाउनै नसक्ने अवस्थामा थिएँ । मिलाउनै पर्ने काम मिलाउन नसकेपछि, उनै जुझारु भाइले भनेको अलि अलि मेहनत नभै बेस्सरी नै मेहनत गरेर बालाई चुनाव जिताउन म हवाइजहाज चढेर, १५ घण्टाको कतारको विमानस्थलको पट्यारलाग्दो बसाइपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएकाे थिएँ ।
मलाई त्रिभुवन विमानस्थल कहिले पनि मनमाेहक लागेन । यहाँ पाइला राख्दासाथ उजाड उजाड जस्ताे लाग्छ । एक किसिमकाे नजानिदाें ऐंठन हुन्छ । यसपाली पनि अध्यागमनकाे डेस्कमा राहदानी र हवाइ टिकट बुझाउन खोज्दा, कुनै हलचल, या केहि भाव नदेखाई एक अधवैंशे कर्मचारीले मेराे राहदानी र टिकट बुझे, उनले “स्वागत छ” भन्नु त परै जावस, मुस्कुराउने चेस्टासम्म गरेनन । मसँग हाते झाेला मात्र थियो, अतः म फटाफट बाहिरिएँ । ट्याक्सीवालाले झण्डै अपहरण नै गर्न आएजस्तो गरी भन्यो - “दार्इ कहाँ पुग्नु पर्ने ?” मैले सिधा जवाफ दिएँ, “त्यहाँ मामा हुनुहुन्छ, मामाकाे कार छ ।” मनमनै कामना गरेँ कि उसकाे घर म्याग्दी नहोस् !